Goobaha Khadka Tooska ah ee Kuuriya ee Kuuriya - Xeerarka Lacag-bixinta ee Khadka Tooska ah
(234 votes, celcelis ahaan, 4.00 out of 5)
Loading ... Sanadihii la soo dhaafay, khamaarka online ee South Korea ayaa ku xaddidnaa in lagu tartamayo tartanka farasiga, baaskiilada iyo tartamada doonnida, iyo sidoo kale ciyaaraha bakhtiyaanasiibka. SportsToto (SportsToto) waxaa la aasaasay 1997. Sanadkii 2000, waxay sharciyeysay casinos, laakiin badankood waxaa loogu adeegaa dadka soo booqda ajaanibta. kaliya hal guri oo khamaar ayaa u furan dadka deegaanka. Maaddaama mashiinnada ciyaarta ee waddanka loo oggol yahay oo keliya casinos, waxay sidoo kale ku xaddidan yihiin Koonfurta Kuuriya.
Muwaadiniinta Kuuriyada Koonfureed waxaa laga mamnuucay inay ku ciyaaraan qamaarka, ma ahan oo keliya gudaha, laakiin sidoo kale dibedda. Hubi, dabcan, way adag tahay in la dhaqan galiyo mamnuucidan, laakiin waxay dhaafaysaa ciqaab adag iyadoo la raacayo sharciga “Ciyaaryahan Caan ah oo Ajnabi ah” oo leh ugu yaraan xabsi 3 sano ah iyo ganaax dhan 25 000 US dollars.
Muwaadiniinta Kuuriyada Koonfureed waxaa loo oggol yahay inay ku dhex ciyaaraan asxaabta iyo xubnaha qoyska qadar aad u yar (in ka yar 10 senti). Waxaan ku xusneynaa khamaarkayaga khamaarka internetka ee waddanka, waxaa jira laba bakhtiyaa-nasiibka: Lotto iyo Toto. Midka labaad waa nooc ka mid ah sharadka ciyaaraha.
Khamaarka internetka ee South Korea
Koonfurta Kuuriya, ma jiro sharci khamaarka internetka ah. Isla mar ahaantaana waxaa jiray sharciyo dhowr ah oo loogu talagalay in lagu xadido ciyaaraha bulshada iyo fiidiyowga. Waqtigan xaadirka ah, midna kama awoodi karo heerka sharciga ee goobaha xakamaynta ee casinos-ka internetka ee dalka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira marinno sharci darro ah oo ay gacanta ku hayaan kooxo dambiilayaal abaabulan. Markii ay ogaadaan hay'adaha sharci fulinta, degelladan si deg deg ah ayaa loo xiraa, ka dibna si dhakhso leh ayaa loo furaa kuwa cusub.
Boqolkiiba tiro aad u tiro badan oo ka mid ah dadka Kuuriyada Koonfureed ayaa booqda labadaba goobaha khamaarka ee gudaha iyo dibedda. Maaddaama dowladdu ay daryeesho dhaqaalaheeda, waxay ku dhawaaqday qorshayaal ay dagaal culus ugula dagaleyso ajaanibta ka shaqeeya. Kordhinta diiradda goobaha qamaarka ee internetka ee isboortiga.
Liiska ugu sareeya ee 10 Korean Sites Online Casino
Boggaga internetka ee ciyaaraha onlineka ayaa aqbalay ciyaartoy ka socota Koonfurta Kuuriya
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbalaya ciyaartoy ka socota Kuuriyada Koofureed, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka bilaabanta mashiinnada ciyaarta ilaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa dib u eegistayada bogagga internetka ee khadka tooska ah, si aad uga feejignaato dhiirrigelinta khadka tooska ah ee ugu wanaagsan, gunnooyinka iyo xulashooyinka lacag bixinta ee ay heli karaan ciyaartoy ka socota Kuuriyada Koonfureed.
Qeybta ugu weyn ee Korea-ga
Gacaliye Lena, maanta waxaan kuu sheegi doonaa safarka uu ku tagayo Kuuriyada Koonfureed, oo si ka badan u jooga caasimadda dal weyn ee Seoul. Waxaa jira qurux badan, nadiif ah oo xiiso leh. Si kastaba ha ahaatee, waxay ila eg tahay in caasimadda Waqooyiga ee Pyongyang, waddooyinka nadiif ah, sidoo kale sababo kala duwan awgood.
Si kastaba ha noqotee, Lena, waxaad si fiican u ogtahay in siyaasaddu aysan aniga i xiiseyneyn, lama dhihi karo khamaarka. Waxay ku taal Seoul, casino ugu weyn Kuuriya - Paradise Casino Walkerhill Ono waad jeclaan doontaa maxaa yeelay waxay dhiirrigelisaa aasaasidda khamaarka mid ka mid ah jilayaasha aad ugu jeceshahay - Robert De Niro. Mise waxaad jeceshahay Al Pacino? Wax kastoo ay ahayd, sida De Niro loogu sawiray boorar badan. Waxaa jiray daqiiqado markii aan bilaabay inaan ka fikiro inuu isagu yahay milkiilaha tooska ah ee Paradise Casino Walkerhill. Guud ahaan, hadday run noqon lahayd, anigu layaabi maayo.
The Paradise Casino Walkerhill wuxuu ciyaaraa kaliya ajaanibta, inta badan muwaadiniinta Japan. Kuuriyaanka qudhoodu waxay halkaas u joogaan oo keliya shaqaale ahaan: maareeyayaasha ganacsadaha, waardiyeyaasha, baararka, farshaxanleyda iyo kuwa kale. By habka, shaqaalaha casino this waa mid aad u wanaagsan. Dhammaan edeb leh, xirfadle ah oo ku hadla Ingiriis wanaagsan, Jabaaniis iyo luqado kale oo ajnabi ah, oo kaliya la leh Ruush ahaan wax aan aad u badnayn. Laakiin haddii kale edeb darro, gardarro aan dhiirrigelin iyo dabeecad xumo. Wax kasta oo aad jeceshahay, Lena.
Hadda waxaa la joogaa waqtigii si faahfaahsan loo faahfaahin lahaa, maxaa yeelay, sidaad ogtahay, dhexdooda waxaa ku jira kan inta badan lagu tiriyo soo saarista khamaarka. Casino waxay ku taal Seoul ee degmada Kavanchzhin-gu Street Uokerhil-177 laakiin waxay ku taal Sheraton Hotel. Xitaa ha i weydiinin sida aan u xasuusto cinwaanka. Xaqiiqdii, waxaan ka helay internetka, iyo qamaarka tagaasida lagu gaaro, kaliya u sheeg darawalka magaca.
Walkerhill waxay u egtahay mid qurxan banaanka iyo gudahaba. Kaliya sawirada khamaarka ayaa si adag loo mamnuucay, marka laga reebo kaliya u adeegida baarka iyo makhaayadaha. Milkiilayaasha casino ma rabaan inay nastaan ​​macaamiisha ku xadgudbay tooshka. Intaas waxaa sii dheer, dadka qaarkiis way ka xishoodaan khamaarkooda hiwaayadaha. Guud ahaan, sababahan awgood oo leh sawir dhibaato dhab ah. Laakiin ha ka welwelin, Lena, wax aan wali ku guuleystey inaan toogto.
Paradise Casino Walkerhill wuxuu shaqeeyaa saacad iyo saacad mana kala go '. Marka laga hadlayo muuqaalka wajiga xakamaynta iyo shuruudaha qaarkood oo aad u adag halkaas. Adiga mooyee Lena lama ogolaan karo, haddii aad xirato mid ka mid ah labbiskooda muuqda iyo kuwa foosha xun, aabbahaana hubaal kama maqna reerka dharka gaagaaban leh iyo kuwa isqarxinaya, oo gashanaya sharaabaadyo wasakh ah. Xitaa in kasta oo xaqiiqda ah in deriska Japan, muuqaal loo arko mid la aqbali karo.
Marka laga hadlayo Jabbaan, guriga, nimankani inta badan waa xasilloon yihiin, qabow yihiin oo la ilaaliyay, laakiin dibedda sida haddii ay beddel u yihiin. The Paradise Casino Walkerhill Waxaan nasiib u yeeshay inaan la kulmo nin magaciisa la yiraahdo Tanaka Esutigatsu. Markuu isbaray, mar aan weydiiyey inuu ka tirsan yahay qabiilka ninja. Wuxuu bilaabay inuu qoslo, isagoo muujinaya ilkihiisa qalloocan wuxuuna yiri qeyb kamid ah qabiilka Honda. Ka dib waxaan u soo bandhigay rooti roon in la yaqaan. khamriga loo dulqaadan karo xumaanta Jabaan - marka marwalba waan dhahaa, mana aanan rumaysan. Laakiin ka dib nus saac ka dib markii la isticmaalayo is biirsaday kala duwan Tanaka ayaa si lama filaan ah u ilaawday Ingiriisiga waxaanan jeclaa inaan ku cayaaro miiska blackjack. Xantaas run bay ahayd. Waxay durba bilawday indho indhayn dhanka amniga ah. Laakiin si uun baan u dajiyay nin waxaanan ka fadhiisiyey miiska.
Marka waad ogtahay Lena, ciyaarista blackjack si fiican miyir qab. Marka waxaan go aansaday inaan caawiyo masaakiinta reer japan oo aan u soo iibiyo xoogaa jajab ah. Ciyaarta ayaa bilaabatay, nasiib uma aanan yeelan, $ 3,000 ayaa loo aaday qasnadda Relief Fund. Isla mar ahaantaana, Tanaka ayaa si qarsoodi ah u guuleysatay. Wuxuu hada u muuqday mid sifiican ufiican, caruurnimadiisuna sifiican ayey ugu faraxday guulkasta. Waxaan go'aansaday in isaga wax walba ay hagaagsan yihiin oo aan wacay. Wadahadalku wuxuu i joojiyay 40 daqiiqo oo fiican. Markii uu soo noqday Tanaka wuxuu durba ku guuleystey inuu ka tago 15,000 oo gaar ah oo laga jaray. Wuxuu bilaabay inuu ooyo iyo inuu ku deeqo inuu dhigo jaakadiisa, shaatigiisa, kabihiisa, iyo saacadaha Casio. Natiijo ahaan, ilaaladu waxay hogaaminayeen Jabaan, in kasta oo aan isku dayay inaan joojiyo. Faa'iido la'aan. Laakiin waxaan u maleynayaa inaad fahantay nuxurka Lena - in noocaani ay yihiin Jabaananka saacadaha dhifka ah ee firaaqada.
Ha welwelin, Lena. Iyadoo Tanaka ay dhan tahay. Wuxuu ku noolaa Sheraton. Wixii aanan aqoon. Dambi ayaa igu kallifay inaan keeno guriga Tanaka, halkaas oo aan ku fadhiisannay taksiga waxaan bilaabay inaan weydiiyo halka uu ku nool yahay. Halkan poluzasnuvshy Japanese wuxuu bilaabay inuu qaado xoogaa biliberdu ah. Kuwaas oo aan ugu jawaabi karo oo keliya: "Xagee ku nooshahay naftaada!" Sidaa darteed, taleefankiisii ​​ayaa dhacay oo si lama filaan ah ayuu u kacay. Waxaan keenay Jabaaniiska albaabka hoteelka, kadib shaqaalaha ayaa ka caawiyay inuu qolkaaga aado. Markii dambe waxaan ogaaday in Tanaka - nin caadi ah. Haa, tani waa wax caadi ah, taas oo si fiican u awoodi karta inay ka baxdo casino $ 15,000. In kastoo, ay noqon karto hanka caadiga ah ee Jabbaan.
Way fiicantahay inaad ku laabato Janno Casino Walkerhill. Blackjack dhab ahaantii waa miyir qab, laakiin casino ugu weyn ee Kuuriya, waxaa jira ciyaaro kale oo 7 15 kaladuwan oo kala duwan, 150 miisaska loogu talagalay blackjack, oo ku saabsan XNUMX mashiinnada ciyaarta, miisas darsin ah oo loogu talagalay turub iyo craps, iyo sidoo kale kakoe- tirada miisaska aan la qiyaasi karin. baccarat. Ma garanayo sababta ay dadku ugu fikiraan Kuuriyada Koofureed, ciyaartaani waa mid caan ah.
Inkasta oo baccarat wali baahi loo qabo wareegyada qaarkood, laakiin lagama yaabo inay awood u yeeshaan inay la tartamaan Texas Hold'em ama cajalad. Jidka Walkerhill aad bay u qurux badneyd:
Lena, ha u xukumin si adag sawirkayga cidla ah, dheh isla sida filim duubista halkaas oo adag. Waana ilaa ay yeelato. Jawiga guud ee Walkerhill halkan wuxuu sifiican ugu gudbinayaa sawirkan:
Waa hagaag, waa waqtigii la xisaabin lahaa Janno Casino Walkerhill. Marka, waa waasac, shaqaale wanaagsan, baarar weyn iyo makhaayad, xulasho wanaagsan oo ciyaaro ah. Maxay noqon kartaa faa'iido darrooyinka jira? Dareenka kormeerka joogtada ah, markaa waxaa jira qaar ka mid ah casinos-yada oo si habboon uma nasato. Ku noqo Jannada Casino Walkerhill miisas aad u tiro badan oo loogu talagalay baccarat, laakiin tani waa sheegashadayda shaqsiyeed. Horaa loo yiri: Ha jeclaan kaarka - wareeji gantaalka nasiibku.
Weli Janno Casino Walkerhill waa meel wanaagsan. Robert De Niro ma xuma talo. Laakiin haddii aadan rumaysan Lena Robert, ma kaxaynaysid baabuur, laakiin waxa fiican inaad tagto oo aad ku hubiso dhammaan khibradaada shaqsiyeed. Xitaa aniga ayaa lacag bixin kara. Ha ka xumaanin, sida Janno Casino Walkerhill runtii waan jeclaaday.
0.1 Khamaarka internetka ee South Korea
0.2 Liiska ugu sareeya ee 10 Korean Sites Online Casino
2.1 Boggaga internetka ee ciyaaraha onlineka ayaa aqbalay ciyaartoy ka socota Koonfurta Kuuriya
2.2 Qeybta ugu weyn ee Korea-ga
casaan cas cas malaha gunnada deebaajiga